Shacabka Puntland ha is raaceen.
Waxa mahad leh ilaaha na uuntay, waxaan ku faraxsanahay si qadarinta mudan ee maanta loo badbaadiyey caasimadii puntland (Garoowe),taasoo si qadarin leh ay dhamaan u guntadeen Odayaasha,Aqoonyahanadda , Ciidamada Daraawiishta iyo Shacabka qadarinta mudan ee reer puntland.
Maanta waxa aan u hamiyeyno waa shantaas gobol iyo Boohoodle,marka si dhayil ah yaan loo bur-burin.
Siyaasadda Somaliya si fiican baan ula soconaa dadkayaga dabadaha jooga,waxaana mar kasta ka soo horjeednaa kooxda Carta,sababtoo ah mawqifkoodu waa cad yahay-kaasoo ah in marna aysan ka tanasulin dhulalka ama deegaanada ay xooga ku haystaan.
Anigu waxaan ahay nin somaaliyeed ,somalina waa la noolaan karaa isna waa ila noolaan karaa,laakiin qofna deegaankiisa lagama qaadi karo sida hadda ka jirta Jubooyinka iyo shabeelooyinka somaaliya.
C/qaasim waa somaali , qof kastana madaxtinimo waa doonankaraa laakiin wax aan marna faa'iido u lahayn waa xukunkaan dadku aysan rabin.
Hadii xukun wax taraayo waad soo martay, maanta somaali badbaadi oo sidaas dawladi kuma soconkartee ka tanasul madaxtinimad aad sheeganaysid.
Shir loo wada dhan yahay ha la qabto halkaasna dawlad rasmi ah oo caalamku aqoonsan yahay la dhiso, si wixii horay u dhacay loo ilaawo, waxaan arinkaan ka wada hadalnay dhalinyaro badan oo aan ku wada noolnahay wadankaan Maraykanka, isku si baan arrinkaas u wada aragnay.
Somaali oo dhan waa dad walaalo ah oo isku jeer ah, kanaa weyn iyo kanaa yar horay bay abwaanadda soomaaliyeed u sheegeen. In xad ahna dagaaladdii sokeeye waa laysku bartay marka hada waa wakhtigii wax kasta la xalin lahaa, waxaan sii maraynaa 11-sanno, ma waxaan nahay dad cawaana oo aan wax garanayn, maxaan dagaalkaan intaas socda ka
helaynaa,maxaan wiilasheena dagaalka ugu dhamaynaynaa, waxaa filayaa waa inoo caqli xumo inaan dagaal aan xad lahayn ku dhamaano.
Waxaan hadalkayga ku soo gaba-gabaynayaa C/qaasim Salaad arintaas aan kor ku sheegay ayaa nasateexadu ku jirtaa, waxaa lagu jiraa bil barakaysan (Ramadaan), wax kasta ilaahay waa aqbalaa bishaan,arinkaas
fuli ilaahay ha kula garab galo.